Soratra Masin' ny Olomasin' ny Andro Farany - Wikipedia
Soratra Masin' ny Olomasin' ny Andro Farany
(tonga teto avy amin'ny Soratra Masin'ny Olomasin'ny Andro Farany)
Misy efatra ny boky heverin'ny Olomasin'ny Andro Farany ho Soratra Masina, sady inoan'ny mpikambana ao fa vokatry ny tsindrimandry avy amin' Andriamanitra, dia ny Baiboly, ny Bokin'i Môrmôna, ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana; ary ny Voahangy Lafo Vidy. Ekeny ho isan'ny Soratra Masina ireo boky telo farany ireo, izay an'ny Olomasin'ny Andro Farany manokana, noho izy ireo mino ny fitohizan'ny fanambaràn' Andriamanitra.
1 Ny Baiboly
2 Ny Bokin'i Môrmôna
3 Ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana
4 Ny Voahangy Lafo Vidy
Ny Bokin'i Môrmôna dia iray amin' ny boky masin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin' ny Adro Farany manampy ny Baiboly sy boky hafa koa izay voasoratra, araka ny fitantaràn' i Joseph Smith, tamin'ny fiteny ejiptiana tamin' ny takela-bolamena hitany teny amin' ny havoan' i Cumorah, ao amin' ny Fanjakan' i New York any Etazonia, araka ny tari-dalana nomen' ny anjely Môrônia tamin' ny 21 Septambra 1823. Avy amin' ny anaran'i Môrmôna, mpaminany niaina tamin' ny taonjato fahefatra teo amin' ny kontinenta amerikana, ny anaran' io boky io.
Misy fizaràna lehibe 15 ao amin' ny Bokin'i Môrmôna, dia ireto avy:
ny Boky voalohan'i Nefia (1 Nefia);
ny Boky faharoan'i Nefia (2 Nefia);
ny Bokin'i Jakôba (Jakôba);
ny Bokin'i Enôsa (Enôsa);
ny Bokin'i Jarôma (Jarôma);
ny Bokin'i Ômnia (Ômnia);
ny Tenin'i Môrmôna;
ny Bokin'i Môsià (Môsià);
ny Bokin'i Almà (Almà);
ny Bokin'i Helamàna (Helamàna);
ny Boky fahatelon'i Nefia (3 Nefia);
ny Boky fahefatr'i Nefia (4 Nefia);
ny Bokin'i Etera (Etera);
ny Bokin'i Môrônia (Môrônia);
Ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana dia iray amin'ny boky masin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Adro Farany manampy ny Baiboly sy ny Bokin'i Môrmôna ary ny Voahangy Lafo Vidy. Atao hoe Doctrine and Covenants izy amin'ny teny anglisy. Amin' ireo Olomasin' ny Andro Farany dia fanangonana fanambaràna vokatry ny tsindrimandry avy amin' Andriamanitra io boky io izay natao hametrahana sy hitantanana ny Fanjakan' Andriamanitra ety an-tany amin' ny Andro Farany.
Araka ny fampianarana dia azo tamin' ny alalan' i Joseph Smith, mpaminany sy filoha voalohan' ny Olomasin' ny Andro Farany, ny ankabeazan' ireo fanambaràna ireo. Misy ny fanampin' ireo fanambaràna ireo izay nampidirin' ny mpadimby toerana azy teo amin' ny fitondrana ny fiangonana taty aoriana.
Ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana dia manana ny anjara toerany manokana tsy itoviany amin' ireo boky masina hafa ampiasain' ny Olomasin'ny Andro Farany amin' ny tsy maha fandikan-tenina soratra taloha azy, fa nosoratana tamin' ny vanimpotoan' izao Andro Vaovao izao sady fanomezan' Andriamanitra tamin' ny alalan' ireo mpaminany izay voafidin' Andriamanitra mba hamerina amin' ny laoniny indray ny Fanjakan' Andriamanitra eto an-tany amin' izao andro diavintsika izao. Ny hampiomana amin' ny Fihavian' i Kristy fanindroany ety an-tany sady hanatanteraka ny tenin' ireo mpaminany tany aloha no tanjon' io boky io.
Ny Voahangy Lafo Vidy dia iray amin' ny boky masin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin' ny Adro Farany manampy ny Baiboly sy ny Bokin' i Môrmôna ary ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Nivoaka tamin'ny taona 1851 ny fanontana voalohany sady ahitana lahatsoratra voarakitra ankehitriny ao amin' ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Atao hoe Pearl of Great Price izy amin' ny teny anglisy.
Ny fanontana nanomboka tamin' ny taona 1902 dia ahitana fizaràna dimy:
ahitana ampahan-dahatsoratra avy amin' ny Fandikan'i Joseph Smith ny Bokin'ny Genesisy, ka nomeny ny lohateny hoe Bokin'i Mosesy;
ahitana ampahan-dahatsoratra avy amin' io fandikan-teny ny Baiboly io, araka ny Filazantsaran'i Matio mitondra ny anarana hoe Joseph Smith–Matio;
fandikan-teny ny papiry ejipsiana nataon'i Joseph Smith azony tamin' ny taona 1835 ka mitondra ny lohateny hoe Bokin'i Abrahama;
ampahan-dahatsoratra avy ao amin' ny tantaran' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany nosoratan' i Joseph Smith tamin' ny taona 1833, atao hoe Joseph Smith–Tantara.
ireo Fanekem-pinoana, izay fanambaràm-pinoana sy fampianarana nosoratan' i Joseph Smith.
Ny anaran' io boky io dia nalaina avy ao amin'ny Testamenta Vaovao izay mampitaha ny Fanjakan'ny Lanitra amin' ny "voahangy lafo vidy" araka ny Filazantsaran' i Matio (Mat. 13.45-46).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Soratra_Masin%27_ny_Olomasin%27_ny_Andro_Farany&oldid=1040314"
Voaova farany tamin'ny 24 Novambra 2021 amin'ny 14:43 ity pejy ity.